Nepal Dayari | अन्तत टिकटक स्टार स्मारिकाको भयो डिर्भोष , सम्वन्ध अन्त्य हुनुको कारण के होला ?
अन्तत टिकटक स्टार स्मारिकाको भयो डिर्भोष , सम्वन्ध अन्त्य हुनुको कारण के होला ?
भाद्र ७, २०७८ सोमबार ७७६ पटक हेरिएको
टिकटक स्टार स्मारिकाको डिभोर्स पछि लाइभमा आएर पूर्वपति विवेकले यस्तो भने ?
विवेकले यो विषयलाई लिएर विषयमा आफ्नी पूर्वपत्नीलाई कुनै प्रकारको लाञ्छना नलगाउन आग्रह गरे । ‘नाम र पैसा कमाएपछि श्रीमानलाई छोडिस भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो बिलकुल गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरिदिनुहोला भन्दै सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।